Ny fitaovana fikarohana teny fototra 8 tsara indrindra (maimaim-poana) ho an'ny 2022 | Martech Zone
Tena ilaina foana ny teny fanalahidy ho an'ny SEO. Izy ireo dia mamela ny milina fikarohana hahatakatra ny momba ny atiny ka asehoy amin'ny SERP ho an'ny fanontaniana mifandraika amin'izany. Raha tsy manana teny fanalahidy ianao dia tsy ho tonga amin'ny SERP ny pejinao satria tsy ho azon'ny milina fikarohana izany. Raha manana teny fanalahidy diso ianao, dia haseho ho an'ny fanontaniana tsy misy dikany ny pejinao, izay tsy mitondra ho an'ny mpihaino anao na kitiho anao. Izany no antony tsy maintsy hisafidiananao tsara ny teny fanalahidy ary hisafidy ny tsara indrindra.
Ny fanontaniana tsara dia ny fomba hahitana ireo teny fanalahidy tsara sy mifanentana ireo. Raha heverinao fa handoa vola be ianao, dia eto aho hanaitra anao — mety ho maimaim-poana tanteraka ny fikarohana teny fanalahidy. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao fitaovana maimaim-poana hahitana teny fanalahidy vaovao ary tsy mandoa na inona na inona. Andeha isika hanomboka.
Google Planet Keyword Planner
Keyword Planner dia iray amin'ireo antsoina hoe fitaovana Google brick-and-mortar ho an'ny fikarohana teny fanalahidy. Tena tsara indrindra amin'ny fitadiavana teny fanalahidy ho an'ny fanentanana dokam-barotra. Mora ampiasaina ilay fitaovana — kaonty Google Ads misy 2FA ihany no ilainao (zavatra tsy maintsy atao ankehitriny). Ary izao no mandeha. Mba hahatonga ny teny fototra ho manan-danja kokoa dia azonao atao ny mamaritra toerana sy fiteny. Ny valiny dia mety ho voasivana ihany koa mba hanilihana ny fikarohana marika sy ny soso-kevitra ho an'ny olon-dehibe.
Araka ny hitanao, ny Keyword Planner dia mamela anao hanombantombana ny teny fanalahidy araka ny isan'ny fikarohana isam-bolana, ny vidin'ny klioba, ny fiovan'ny lazan'ny telo volana, sy ny sisa. Ny zava-misy dia ny teny fanalahidy hita eto dia tsy ho vahaolana SEO tsara indrindra, satria ny fitaovana dia mifanaraka amin'ny karama, fa tsy ny fanentanana organika. Izay tena mazava tsara amin'ny fitambaran'ny metrika teny fanalahidy misy. Na izany aza, ny Keyword Planner dia toerana fanombohana tsara.
Rohy fanamarihana by SEO PowerSuite dia rindrambaiko matanjaka manana fomba fikarohana teny fototra 20 mahery eo ambanin'ny saron-tava, avy amin'ny Google Manontany koa ny olona amin'ny teknika fikarohana mpifaninana maromaro. Amin'ny farany, mamela anao hamorona hevitra teny fanalahidy vaovao an'arivony amin'ny toerana iray. Ny Rank Tracker koa dia mamela anao hikaroka ireo teny fanalahidy mifandraika amin'ny toerana misy anao sy ny fiteninao. Satria tena lojika fa ny angon-drakitra voaangona avy amin'ny milina fikarohana iray any Etazonia dia tsy ho marina amin'ny fanontaniana amin'ny teny Rosiana na Italiana.
Ny Rank Tracker koa dia mamela anao hampiditra ny kaontinao Google Search Console sy Analytics ary manana ara-bakiteny ny angona teny fototra rehetra amin'ny toerana iray.
Ho fanampin'ny teny fanalahidy manokana, ny Rank Tracker dia manasongadina metrika marobe hanampiana anao hanombantombana ny fahombiazan'ny teny fanalahidy, toy ny isan'ny fikarohana isam-bolana, ny fahasarotan'ny teny fanalahidy, ny fifaninanana, ny fifamoivoizana tombanana, ny CPC, ny endri-javatra SERP, ary ny marika ara-barotra sy SEO maro hafa. .
Ny pikantsary etsy ambany dia mampiseho ny maody Keyword Gap, izay ahafahanao mahita ny teny fanalahidy efa ampiasain'ny mpifaninana aminao.
Ny zavatra tsara iray hafa momba ny Rank Tracker dia ny hoe mihaino izay ilain'ny mpampiasa ny mpamorona azy. Ohatra, naverin'izy ireo vao haingana ny tabilao Fahasarotan'ny Keyword:
Ity tabilao ity dia ahafahanao manindry izay teny fototra rehetra ary mahazo avy hatrany ny toerana ambony 10 SERP miaraka amin'ny antontan'isa momba ny kalitaon'ireo pejy ireo.
Ny Rank Tracker ihany koa dia mamela anao hanivana ny tenimiafinao miaraka amin'ny rafitra sivana mandroso vaovao ary mamorona sarintany teny fanalahidy feno. Ny isan'ny teny fanalahidy, raha ny marina, tsy voafetra.
Valio ny besinimaro
Valio ny besinimaro dia tsy mitovy amin'ny fitaovana hafa mitovy amin'izany na eo amin'ny fampisehoana na amin'ny karazana vokatra. Satria ity mpamorona teny ity dia ampiasain'ny Google Autosuggest, ny hevitra rehetra hita amin'ny alàlan'ny Valio ny Public dia fanontaniana mifandraika amin'ny fanontanianao voalohany. Izany dia mahatonga ilay fitaovana tena manampy rehefa mikaroka teny fanalahidy lava sy hevitra votoaty vaovao:
Ankoatra ny fanontaniana, ny fitaovana dia mamorona andian-teny sy fampitahana mifandraika amin'ny fangatahana voa. Ny zava-drehetra dia azo alaina amin'ny endrika CSV na ho sary.
Mpamorona Keyword dia vokatra avy amin'ny Ahrefs. Ity fitaovana ity dia tena mora ampiasaina - ny hany ilainao dia ny fampidirana ny teny fototra voa, safidio ny motera fikarohana sy ny toerana, ary voila! Ny Keyword Generator dia handray anao miaraka amina andiana hevitra teny fanalahidy vaovao sy fanontaniana mifandraika amin'ny metrika roa toy ny isan'ny karoka, ny fahasarotana ary ny datin'ny fanavaozana data farany.
Keyword Generator dia mamoaka teny fanalahidy 100 sy hevitra fanontaniana 100 maimaim-poana. Raha te hahita bebe kokoa dia asaina mividy fahazoan-dàlana ianao.
Antitra tsara Search Console ny teny fanalahidy efa nomenao laharana ihany no hampiseho aminao. Na izany aza, misy toerana ho an'ny asa mahavokatra. Ity fitaovana ity dia afaka manampy anao hamantatra ireo teny fototra tsy fantatrao fa manana laharana ianao, ary manatsara ny toerana ho azy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny Search Console dia mamela anao hahita teny fanalahidy tsy mahomby.
Ny teny fanalahidy tsy mahomby dia ny teny fanalahidy misy toerana 10 ka hatramin'ny 13. Tsy ao amin'ny SERP voalohany izy ireo fa mitaky ezaka kely hanatsarana azy.
Ny Search Console koa dia mamela anao hanamarina ny pejy ambony indrindra ho an'ny teny fanalahidy tsy mahomby, ka manome anao toerana fanombohana tsara amin'ny fikarohana teny fanalahidy sy fanatsarana votoaty.
Nanontany koa, araka ny azonao vinavina amin'ny anaran'ilay fitaovana, dia misintona ny angona avy amin'ny Google Manontany koa ny olona noho izany dia mandray anao miaraka amin'ny andiana hevitra teny fototra vaovao. Ny hany ilainao dia ny mampiditra ny teny fototra voanao ary mamaritra ny fiteny sy ny faritra. Ny fitaovana dia hanao fikarohana avy eo ary hanolotra ny valiny ho andiana fanontaniana mivondrona.
Ireo fanontaniana ireo dia tena hevitra votoaty efa vonona (na lohateny). Ny hany mahasosotra anao dia ny tsy manana afa-tsy 10 fikarohana maimaim-poana isam-bolana ianao ary tsy afaka manondrana ny angona amin'ny endrika rehetra. Eny, ahoana no nahavitanao izany, mety hanontany ianao. Ny valiny dia pikantsary. Tsy hevitra tsara ny mampiditra pikantsary ao amin'ny tatitra ho an'ny mpanjifa, fa fomba iray hivoahana amin'ny filan'ny tena manokana izany. Amin'ny ankapobeny, Also Asked dia mpamorona hevitra votoaty mahafinaritra, ary ny hevitra atolony dia mety tsara ho an'ny bilaogy sy ny fampielezan-kevitra.
Keyword Explorer dia iray amin'ireo fitaovana namboarina an'ny MOZ. Midika izany fa mila kaonty MOZ ianao hampiasa ilay fitaovana. Izay zavatra mora tokoa. Ny algorithm dia tena mora - mila miditra ny teny fanalahidy ianao, mamaritra ny faritra sy ny fiteny (miaraka amin'ity tranga ity izy ireo), ary eto ianao. Ny fitaovana dia ho tonga miaraka amin'ny soso-kevitry ny teny fanalahidy sy ny valin'ny SERP ambony ho an'ny fangatahana voa.
Raha vao clicko ianao Jereo ny soso-kevitra rehetra ao amin'ny Soso-kevitra amin'ny teny lakile Module, ny fitaovana dia hampiseho anao hevitra teny fanalahidy vaovao 1000, noho izany dia manana karazany azo isafidianana ianao.
Raha ny momba ny metrika SEO, tsy dia manana famakafakana firy ianao eto - ny fitaovana dia tsy mamela afa-tsy ny hamafin'ny fikarohana sy ny maha-zava-dehibe azy (fifangaroan'ny laza sy fitoviana amin'ny teny fototra voa).
Tahaka ny ao amin'ny Also Asked, Keyword Explorer dia manome anao fikarohana maimaim-poana 10 isam-bolana. Raha mila angona bebe kokoa ianao dia mila maka kaonty karama.
Keyword surfer dia plugin Chrome maimaim-poana Surfer-powered izay, rehefa tafapetraka, dia mampiseho ho azy ny angon-drakitra teny fanalahidy ao amin'ny Google SERP rehefa mikaroka na inona na inona ianao.
Raha ny momba ny metrika SEO sy PPC, ny Keyword Surfer dia hampiseho ireto manaraka ireto: isan'ny fikarohana isam-bolana sy ny vidin'ny klioba ho an'ny fangatahana voa, ny habetsaky ny fikarohana, ary ny haavon'ny fitoviana amin'ny soso-kevitra teny fototra vaovao. Ny isan'ny soso-kevitra dia miovaova arakaraka ny lazan'ny teny (angamba?), satria nahazo teny fanalahidy 31 aho sakafo indianina ary 10 ihany ho an'ny gelato.
Ny fitaovana dia tsy manova toerana ho azy araka ny fiteny fangataham-panontaniana, fa afaka mamaritra izany ho anao manokana ianao mba hahazoana angona mifandraika.
Ankoatra izany, ny fitaovana dia hanolotra anao ny antontan'isa momba ny fifamoivoizana ho an'ny pejy ao amin'ny SERP amin'izao fotoana izao sy ny isan'ny fanontaniana mifanaraka amin'izy ireo.
Ho fanampin'ny famakafakana teny fanalahidy, ny fitaovana dia manolotra anao hamorona drafitra lahatsoratra mifototra amin'ny fangatahana voa miaraka amin'ny Surfer AI. Endri-javatra mahafinaritra, izay mety ho fanombohana tsara rehefa miasa miaraka amin'ny atiny ianao. Na izany aza, ny andrana amin'ny fitaovana faharanitan-tsaina artifisialy Nasehon’izy ireo fa lavo lavitra noho ny tena mpanoratra olombelona izy rehetra.
Araka ny hitanao dia afaka mahita teny fanalahidy maimaim-poana ianao. Ary ny vokatra dia ho haingana, tsara kalitao, ary ny tena zava-dehibe, amin'ny ampahany. Mazava ho azy fa misy fitaovana sy fitaovana maimaim-poana bebe kokoa ho an'ny fikarohana teny fanalahidy, noraisiko fotsiny ireo izay toa mahaliana sy mahasoa indrindra. Raha ny marina, inona no fitaovana tianao indrindra? Zarao amin'ny fanehoan-kevitra.
Disclosure: Martech Zone dia ahitana rohy mifandray amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: ainanontany ihany koavalio ny vahoakafahaizana artifisialyfitaovana seo maimaimpoanafitaovana maimaimpoanagoogle autosuggestGoogle Keyword Plannergoogle teny lakilekonsole fikarohana googlefahasarotana teny fanalahidyKeyword explorermpamorona teny fanalahidyfikarohana siantifikakeyword surferteny fanalahidy organikamandoa isaky ny kitihoppc fikarohanalaharana trackerboky fikarohanaSEOteny lakile seoseo toolssurfer ai